‘किष्ट बैंकलाई इज्जतदार बैंकका रुपमा स्थापीत गर्छु ’ - Business Sansar
‘किष्ट बैंकलाई इज्जतदार बैंकका रुपमा स्थापीत गर्छु ’
Posted on Mar 20, 2014 Mar 21, 2014 by admin
लोकसेवाको परिक्षा पास गर्ने हिम्मत रचेको एउटा ठिटोले लोकसेवामा जागिर नखुलेपछि नीजि क्षेत्रमै जागीर खाने निर्णय गर्यो । आजभन्दा करिव २४ बर्ष अगाडि दिएको त्यही दरखास्तबाट बैंकीङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको व्यक्तिको नाम हो – कुमार लम्साल । लम्साल २०३९ सालमा अध्ययन र कामको खोजिमा झापा जिल्लाबाट काठमाडौं आएका थिए । जो अहिलेको अबस्थामा ठुलो नामी तर सँगसँगै केहि क्षति व्यहोर्नु परेको किष्ट बैंकलाई सही वाटोतर्फ लम्काउने यात्रामा अनबरत लागिरहेका छन् । हुनत उनले बैंकर्स नै बन्ने लक्ष लिएका होइनन्, तर विभोर विकास बैंक हुँदै सानीमा बैंकमा लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको रुपमा सफलतापूर्वक काम गरीसकेका उनी हाल किष्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका छन् । पद र प्रतिष्ठा भन्दा इमान्दारीतापूर्वक गरिने कामलाई महत्वपूर्ण ठान्छन् कुमार लम्साल । जुन पदमा रहेपनि राम्रो र असल काम गर्नुपर्छ भन्ने उनको ठम्याई छ । लम्सालको प्रवेशसँगै समस्याग्रस्थ अबस्थामा रहेको किष्ट बैंकले फड्को मार्न थालेको छ । प्रस्तुत छ उनै बरिष्ठ बैंकर्स कुमार लम्सालसँग पत्रकार माधव निर्दोषले गर्नुभएको विजनेस बार्ता ।
पछिल्लो समयमा नेपालको वित्तिय क्षेत्र केही समस्यातर्फ धकेलीएका छन् होइन ?
गएको ४÷५ बर्षको अवधिमा नेपालका बैंकहरुले अलिकति अफ्यारो स्थिति फेस गरेकै हुन् । अहिलेको अबस्था र विशेषगरी आजको दिनमा भन्नुपर्दा अब बैंकहरु स्थापीत हुने बाटोमा अघि बढिसकेका छन् । बैंकहरुप्रति जनताको विश्वास वढेको छ । बैंकहरुले राम्रैसँग काम गरेका छन् । प्रतिश्प्रर्धा बढी छ, जसले गर्दा धेरै नाफा छैन । यसै कारणले पनि बैंकहरुलाई मर्जर गरेर लार्ज स्केलमा बढाएर लैजाने र प्रतिश्प्रर्धा घटाउने काम भइरहेको छ ।
केही समयको अवधिलाई हेर्दा बैंकहरुले भोग्नुपरेको समस्या घर जग्गामै लगानी भएका कारण हो त ?
पहिला त्यस्तो भएकै हो । अहिले त्यो अबस्था घटेर गएको छ । त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी भएका कारण त्यस्तो भएको हो । अहिलेको अबस्थामा सुधार आइसकेको छ । वैंकीङ क्षेत्रको अहिलेको अबस्था नराम्रो छैन । अहिले बैंकहरु सुधारको अबस्थामा छन् ।
तपाई किष्ट बैंकमा आउँदा समस्याग्रस्त बैंकमा आउनुभयो, अहिले किष्ट बैंकको बास्तविक अबस्था कस्तो छ ?
हामीले सबै कुरा प्रकाशित गरेकै छौं । अहिलेको अबस्थालाई हेर्ने हो भने किष्ट बैंकमा अहिले कुनै समस्या छैन । १९ अरबको पुँजी छ, ५१ वटा शाखा छन् । सक्षम जनशक्ति छ । केही लोन उठाउन समस्या देखिएको छ, तर अब त्यो काममा हामी लागीसकेका छौं । हाम्रा सामु च्यालेन्जहरु छन्, तर हामीले सामना गर्दछौं ।
उसोभए किष्ट बैंक अब रफ्तारमा अघि बढेकै हो त ?
त्यसका लागि केही च्यालेन्जहरु छन् । आजको भोलि नै रफ्तारमा जान्छ भन्ने होइन । भएका समस्यालाई पहिलै सम्बोधन गरेर त्यसका पाटपुर्जालाई सहि ट्रयाकमा ल्याउनु पर्छ, अनि मात्रै अगाडि बढ्छ । पहिला नेगेटीभ अबस्थामा भएका कुरालाई जीरो अबस्थामा ल्याउनु पर्छ । अनि मात्रै रफ्तार अगाडि बढ्छ । चुनौती जे जति छन् हामी त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौं ।
कार्यकारी प्रमुख भएर किष्ट बैंकमा काम गर्दाको अनुभव ?
कार्यकारी प्रमुख भएर बैंकमा काम गरेको ५÷६ बर्ष भयो । किष्टमा आएको धेरै भएको छैन । फरक बैंकमा काम गर्दा केही फरकपन हुन्छ नै । आफैले सेट गरेको बैंकमा रहँदा र अहिले यहाँ अरुले सेट गरेको बैंकमा आउँदा केही फरक महसूस भएकै छ । अरुले सेटअप गरेको ठाउँमा केही फरक सिस्टम पनि हुन्छ । तर काम उस्तै हो । अहिले किष्ट बैंकको अबस्थाले अझ बढी ध्यान दिएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ ।
बैंकीङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरुको अन्तिम लक्ष सीइओ हुनु नै हो होइन ?
हा… (लामो हासोसँगै केही गम्भिर भएर) काम हो । इमान्दारीतापूर्वक काम गर्ने हो । जुन ठाँउ र जुन पोष्टमा भएपनि राम्रो काम गर्ने हो । काम गर्दै जाँदा सीइओको रोलमा पनि गर्न पाइयो, यो खुसीको कुरा हो । तर सबैभन्दा ठुलो कुरा असल काम नै हो ।
यहाँको अबको लक्ष ?
किष्ट बैंकलाई राम्रो बनाउने हो । यसका चुनौतीहरु पार गरेर यस बैंकलाई एउटा इज्जतदार बैंकका रुपमा स्थापीत गर्ने हो । तत्कालका लागि यो भन्दा अर्को कुनै लक्ष छैन ।
थप बैंकहरु नेपालमा खुल्न सक्ने अबस्था या खुल्न नपर्ने कारण, के देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको अबस्थामा बैंकहरु थप खुल्नुपर्ने जरुरी छैन । बैंकहरु अहिले मर्जरको प्रकृयामा छन् । राष्ट्र बैंकबाट पनि मर्जर गर्ने, साइज बढाएर लैजाने प्रतिश्प्रर्धालाई कम गर्ने कुरामा जोड दिइएको अबस्था भएकोले यो स्थितिमा नयाँ बैंकहरु आउलान् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रमा कम लगानी गरेको र अनुत्पादन क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?
बैंकहरुले उत्पादन र अनुत्पादन दुवै क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कहिलेकाँही अलिक रिक्स हुन्छ भने उत्पादन क्षेत्रमा त्यस्तो कम हुन्छ र त्यसले देशलाई पनि फाइदा हुन्छ । अर्को कुरा बैंक आफैले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्छु भन्ने होइन, कोही मानिसले गर्छु भनेर आउँछ भने मात्रै हामीले सपोर्ट गर्ने हो । त्यस्तो किसिमको डिमान्ड आउँदा बैंकहरुले गरिरहेका पनि छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुको लगानी कतातर्फ केन्द्रीत छ ?
बैंकहरुको अहिले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढेको छ, हाइड्रो पावरमा पनि लगानी छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा पहिले जसरी लगानी भयो, ३÷४ बर्षदेखि अहिलेसम्म त्यसलाई म्यानेज गरिसकेको अबस्था छ र अहिले त्यसतर्फ लगानी धेरै छैन । पहिला अनुत्पादन क्षेत्र घर जग्गामा बैंकहरुले लगानी गरेका कारण बैंकहरुमा केही समस्या आएकै हो । अहिलेको अबस्थालाई हेर्दा त्यसलाई म्यानेज गरेर उत्पादन क्षेत्रमै लगानी बढाएको अबस्था छ ।
सँगसँगै खुलेका सहकारीहरु पनि शहर केन्द्रीत भए, जसका कारण बैंकहरुलाई केही असर परेको छ वा छैन ?
अबश्य पनि केही व्यापार सहकारीले गरेका छन् । त्यहाँबाट पनि केही कम्पीटेशन आएको होला । अर्को कुरा त्यो सहकारी हुँदैनथ्यो भने त्यो विजनेश पनि हुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो अथवा त्यो विजनेसमा बैंकको लगानी हुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्न सकिने अबस्था छैन । सहकारीले बैंकलाई त्यस्तो धेरै प्रभाव नै पार्ने गरी असर पारेको जस्तो मलाई लाग्दैन । सहकारी मात्रै होइन, हरेक किसीमका बैंकहरु छन् । विकास बैंक छन्, फाइनान्सहरु छन्, उनीहरु सबैका आआफ्नै क्षेत्र छ आआफ्नै क्लाइन्टसहरु छन् । सबै आआफ्नै ढंगले अघि बढीरहेका छन् ।
अहिले बैंकको व्याजदरमा पनि उतारचढाव आएको छ, यसले समग्र बैंकीङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो संकेत गर्ला ?
यो रेगुलर भइरहने क्रियाकलाप हो । बजारमा लोनको माग कति आयो या बजारमा पैसा अभाव कति भयो त्यसैको आधारबाट यो उतार चढाव भइरहने हो । लोनको डिमान्ट बढी भयो भने रेट घट्छ, लोनको डिमान्ट कम भयो भने रेट बढ्छ । यो साइकल जस्तै घुमीरहने प्रकृया हो यो चलीरहन्छ । डिपोजीट कम आयो भने बढ्छ, लोनको बढी माग भयो भने घट्छ, यो एउटा निरन्तर चलीरहे प्रकृया भएका कारण समग्र लार्जस्केलको अर्थतन्त्रलाई यसले खासै फरक पार्दैन ।
बैंकीङ क्षेत्रमा केही नयाँ नीतिहरु आबश्यक ठान्नुहुन्छ ?
बैंक भनेको कुनै नीति नै नचाहिने सेक्टर हो । पव्लिकको विश्वास लिएर विना धितो पैसा उठाउने क्षेत्र हो । यसमा सही ढंगले विश्वास दिलाउनु पर्छ । विश्वास दिलाउन सक्ने किसिमका कामहरु गर्नुपर्छ । बैंक भनेकै विश्वास हो । विश्वासलाई कायम राख्न सक्नु पर्छ । अर्को कुनै मान्छेले विना धितो लोन दिएको अबस्थालाई सोही किसिमको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई कुनै नीतिहरु आबश्यक पर्दैन ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ? बैंकको आर्थिक अबस्था र मुलुकको आर्थिक अबस्था सँगसँगै चल्छ होइन ?
बैंकहरुको अबस्थाले मुलुकको आर्थिक अबस्था वा मुलुकको आर्थिक अबस्थाले बैंकको आर्थिक अबस्था जनाउँछ । देशको उद्योग धन्दा राम्रो भयो भने बैंकमा धेरै रकम हुन्छ र बैंकहरु प्रोफेश्नल भएर जान्छन् । निश्चित रुपमा सेयर मार्केट र बैंक उस्तै उस्तै हुन् । बैंकले देशको अर्थतन्त्र बोलीरहेको हुन्छ । आज नेपालको राजनीतिक अबस्था अस्थीर भएका कारण जसरी आर्थिक परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । संविधान सभाको निर्वाचन पनि दुई पटक गर्नुप¥यो । अब संविधान बन्ने चरणमा छ, अब विस्तारै अर्थतन्त्र राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
खुद्रामा चिनीको मूल्य १० रुपैयाँले बढ्ने
तीन बर्ष भित्र विद्युतभार मुक्त राष्ट्र